Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. जिर्ण पुलबाटै हिँड्न बाध्य छन दुर्गमका विद्यार्थी, मर्मतमा कसैको ध्यान पुगेन – Emountain TV
प्युठान, ११ असार । झिमरुक गाउपालिका वडा नम्बर ४ ओखरकोट स्थित सयमुरे र खहरे गाउँ जोड्ने झोलुङ्गे पुल जीर्ण हुँदा दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने स्थानीय र बालबालिकालाई सास्ती हुने गरेको छ ।
पुल हुदाँ १० मिनेटमा पुग्ने उनीहरुलाई अहिले एकघण्टा हिड्नु पर्ने समस्या छ । खोलाको झोलुङ्गे पुल जिर्ण हुँदा स्थानीयले समस्या भोग्नु परेको स्थानिय शान्ता के सिले बताउनुभयो। खोलो तर्दा मान्छे बगेको दुखान्त समेत उहाले सुनाउनुभयो । गर्तङखोलामा दशक अघि बनाइएको पुल जीर्ण भएको हो। जीर्ण पुलबाट आवतजावत गर्दा दुर्घटनाको भय निम्तिएको छ ।
पुलको मुख्य लठ्ठा खिया लागेर चुँडिन लागेको छ । बिच्छ्याइएका काठका फल्याक कुहिएर झरेका छन् । ठाउँठाउँमा जालीहरु चुडिँएका छन्। झोलुङ्गे पुल कोल्टे बनेको छ । त्यसैले मान्छेहरु पुलबाट हिड्न डराउछन।।सोही पुल तरेर पैदलयात्रा गर्ने स्थानीयहरु त्रासका बिच पार गर्छन् । पुलको अवस्थाका कारण विद्यालय आउजाउ गर्ने विद्यार्थीलाई पुल तार्न अनिवार्य रुपमा अभिभावकहरु आउनुपर्ने बाध्यता छ।’
उहाँले सुनाउनुभयो । बर्खाका बेला झन ठूलो सास्ती छ।वर्षात्को समयमा खोला बढेपछि तर्न नसकिने र पुल पनि जीर्ण भएकाले आवतजावत गर्न समस्या भएको स्थानीय दामोदर पोख्रेलले बताउनुभयो। उहाले भन्नुभयो, ‘पुलमा आवतजावत गर्न डर लाग्छ ।’ ‘बालबालिकालाई बोकेर खोलो तार्छौ’ उहाले भन्नुभयो। खोलामा पुल नहुँदा विद्यार्थीलाई समेत आवतजावत गर्न समस्या भएको बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापक बिष्णु पोख्रेलले वताउनुभयो।
अहिले बिध्यालयमा जम्मा ८५ जना बालबालिका अद्यनरत छ्न। गाउँपालिकाबाट भैपरी बजेट अन्तर्गत ५० हजार रकम बिनियोजन गरिएको झिमरुक ४ का वडाअध्यक्ष सिताराम पोख्रेलले बताउनुभयो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा लेखेको छ ।